10 Zvinhu Izvo C-Suite Inoda Kuziva Nezve Analytics - Motio
by John BoyerApr 21, 2022Business Analytics, Bhizinesi Njere, Uncategorized0 mashoko
Kana usati wafamba nguva pfupi yadarika, heino pfupiso yezvinoitika mundima yeanalytics yaungadaro wakapotsa mumagazini yeairline seatback.
Haisi kunzi Decision Support Systems zvakare (kunyangwe yaive makore makumi maviri apfuura). Kwete kushuma (makore gumi nemashanu), Bhizinesi Intelligence (makore gumi), kana kunyange Analytics (makore mashanu). Ndizvo Augmented Analytics. Kana, Analytics yakadzikwa neAI. Kucheka edge Analytics ikozvino kunotora mukana wekudzidza kwemuchina uye kunobatsira mukuita sarudzo kubva kune data. Saka, neimwe nzira, tadzokera kwatakatanga - rutsigiro rwesarudzo.
Dashboard. Makambani ari kufambira mberi ari kubva kure nemadhibhodhi. Dashboards akazvarwa kunze kwemanejimendi nezvinangwa kufamba kwema1990s. Dashboards anowanzo kuratidza Key Performance Indicators uye kuronda kufambira mberi kune chakanangana nezvinangwa. Dashboards ari kutsiviwa ne augmented analytics. Panzvimbo peiyo static dashboard, kana kunyange imwe ine drill-kuburikidza kune ruzivo, AI yakapinza analytics inokuzivisa iwe kune zvakakosha munguva chaiyo. Neimwe nzira, uku zvakare kudzoka kune manejimendi nemaKPIs akanyatsotsanangurwa, asi nekumonyorora - uropi hweAI hunotarisa metrics kwauri.
Zvishandiso zvakajairika. Mazhinji masangano haachave nebhizinesi rimwechete chiyero cheBI chishandiso. Masangano mazhinji ane 3 kusvika ku5 Analytics, BI uye maturusi ekubika aripo. Zvishandiso zvakawanda zvinobvumira vashandisi ve data mukati mesangano kuwedzera zvirinani masimba ezvishandiso zvega. Semuyenzaniso, chishandiso chakasarudzika musangano rako chead hoc analytics hachizombofa chakakunda papixel-yakakwana mishumo inodiwa nehurumende nemasangano anodzora.
The Cloud. Masangano ese anotungamira ari mugore nhasi. Vazhinji vakatamisa data yekutanga kana maapplication kune gore uye vari mukuchinja. MaHybrid modhi anozotsigira masangano munguva iri pedyo apo ivo vachitsvaga mari pasimba, mutengo uye kugona kwe data analytics mugore. Masangano akangwara ari kusiyanisa uye kuvharidzira mabheti avo nekusimudzira akawanda makore vatengesi.
Master data management. Zvinetso zvekare zvitsva zvakare. Kuve nenzvimbo imwe chete yedata yekuongorora kwakakosha kupfuura nakare kose. Iine ad hoc analytic maturusi, maturusi kubva kune akawanda vatengesi, uye isina kutariswa mumvuri IT, zvakakosha kuti uve neshanduro imwechete yechokwadi.
Remote workforce ari pano kugara. Denda ra2020-2021 rakasundidzira masangano mazhinji kuti agadzire rutsigiro rwekubatana kure, kuwana data uye analytic application. Maitiro aya haaratidzi kuderera. Geography iri kuwedzera kuve chipingamupinyi uye vashandi vari kujaira kushanda pazvikwata zvakapararira nekungoonana kutarisana kumeso. Gore ndiyo imwe inotsigira tekinoroji yemaitiro aya.
Data Science nokuda kwavanhu vazhinji. AI mune analytics inoderedza chikumbaridzo kuData Sainzi sebasa mukati mesangano. Pachave pachine kudiwa kwehunyanzvi data masayendisiti ane hunyanzvi mukukodha uye kudzidza muchina, asi AI inogona kuvharisa mukaha wehunyanzvi kune vanoongorora vane ruzivo rwebhizinesi.
Kuita mari yedata. Kune nzira dzakawanda dzekuti izvi zviri kuitika. Masangano anokwanisa kuita sarudzo dzakangwara nekukurumidza anogara aine mukana wemusika. Pane yechipiri kumberi, tiri kuona mukushanduka kweWebhu 3.0, kuyedza kuronda data uye kuita online kushomeka (uye nekudaro kwakakosha) nekushandisa blockchain masisitimu. Aya masisitimu mafingerprint digital midziyo ichiita kuti ive yakasiyana, inorondwa uye inogona kutengeswa.
Hurumende. Nezvichangobva kuitika zvekunze pamwe nezvinovhiringidza zvemukati, inguva yakakosha yekuongorora zvakare iripo analytic / data policy, maitiro uye maitiro muchiedza chehunyanzvi hutsva. Maitiro akanakisa anofanirwa kutsanangurwa patsva sezvo kune akawanda maturusi? Maitiro ekutevedzera zvinodiwa nemutemo kana ongororo inoda kuongororwa here?
Chiono. Sangano rinotsamira kune maneja kuita zvirongwa uye kuseta kosi. Munguva dzemhirizhonga uye dzisina chokwadi zvakakosha kuratidza chiono chakajeka. Rimwe sangano rinofanirwa kunge richienderana negwara rinotarwa nehutungamiriri. Sangano rinokurumidza richaongorora zvakare kazhinji munzvimbo inoshanduka uye kosi-yakarurama, kana zvichidikanwa.